पहिलो सन्तानको आगमनको कारण दम्पतीले कसरी सामना गर्ने | बेजिया
मारिया जोस रोल्डन | 12/01/2022 22:14 | सम्बन्ध
बच्चाको आगमनले सधैं दम्पतीको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ। राम्रोसँग कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर थाहा नपाई, यो धेरै सम्भव छ कि सम्बन्धको जग खतरनाक तरिकामा दरार गर्न थाल्छ। बच्चाको जन्म निस्सन्देह आमाबाबुको लागि लिटमस परीक्षा हो।
नयाँ परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थाहा पाउँदा सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ बच्चा जन्मेको तथ्यलाई पूर्ण रूपमा आनन्द लिन सक्षम हुनु। यसपछिको लेखमा हामी तपाइँलाई पहिलो सन्तान आउनुअघि नै दम्पतीमा गडबडी हुनसक्ने कारण र यसको समाधानका लागि के गर्ने भन्ने कुरा देखाउनेछौँ।
1 पहिलो सन्तानको जन्मपछि दम्पतीको संकट
2 सन्तानको आगमनको कारण दम्पतीमा संकटको कारण
3 पहिलो बच्चाको जन्म पछि संकटको क्षणबाट बच्न के गर्ने?
पहिलो सन्तानको जन्मपछि दम्पतीको संकट
प्रत्येक जोडीले सम्भावित संकटलाई फरक तरिकाले सामना गर्छ। कतिपय अवस्थामा, झगडा वा निन्दाहरू निरन्तर रूपमा हुन्छन्, जबकि अन्य अवस्थामा भावनात्मक स्तरमा दूरी उत्पन्न हुन्छ। यो जस्तोसुकै होस्, यो सम्बन्धको लागि बिल्कुल राम्रो छैन, यसले महत्त्वपूर्ण बिग्रन्छ।
यदि चीजहरू काम गर्दैनन् भने, यो सम्भव छ कि माथि उल्लेखित असुविधाले सम्पूर्ण परिवारलाई नकारात्मक रूपमा हानि पुर्‍याउनेछ। यसबाट बच्नको लागि, यस्तो असुविधाको कारणहरू पत्ता लगाउन र पारिवारिक केन्द्रकलाई कुनै पनि समयमा क्षति नहोस् भनेर कार्य गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
सन्तानको आगमनको कारण दम्पतीमा संकटको कारण
कारणहरू मध्ये पहिलो सामान्यतया आमाबाबु दुवैको व्यक्तिगत पक्षहरूको कारण हो। आमाको मामलामा, यो ध्यान दिनुपर्छ कि उनको शरीरको साथसाथै उनको भावनात्मक स्थितिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएको छ। बाबुको हकमा जिम्मेवारी धेरै ठूलो छ, विशेष गरी जब यो सानो बच्चाको हेरचाह गर्ने कुरा आउँछ।
संकटको अर्को कारण दिनहुँको दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन हुनु पनि हुन सक्छ। बच्चा हुनु भनेको आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नु र बच्चाको कल्याणमा पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। आमाबाबुसँग आफैंको लागि समय छैन र विच्छेदन गर्न सक्षम हुन सक्छ।
पहिलो सन्तान हुँदा दम्पतीहरूले झगडा गर्नुको सबैभन्दा धेरै कारणहरू मध्ये एक घरको काम साझा गर्नु हो। धेरै अवसरहरूमा त्यहाँ कुनै समानता छैन जब यो घर भित्र विभिन्न कामहरू विभाजन गर्न आउँछ र यो बलियो द्वन्द्व मा समाप्त हुन्छ।
यसमा कुनै शंका छैन कि बच्चाको हेरचाह दम्पती भित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गतिविधि हुन्छ। यसको मतलब यो जोडीको समय एकदमै घटेको छ। दम्पतीको आनन्दका क्षणहरू लगभग पूर्ण रूपमा गायब हुन्छन् र यसले सम्बन्धको राम्रो भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
पहिलो बच्चाको जन्म पछि संकटको क्षणबाट बच्न के गर्ने?
यो राम्रो छ कि भविष्यका आमाबाबुले जन्मनु अघि आफैंलाई जानकारी दिनुहुन्छ, बच्चा जन्माउने सबै कुरा।
तपाइँको बच्चाको जन्म हुँदा तपाइँले सामना गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरू संगठित गर्न बस्न, कुराकानी गर्न र सुरु गर्न ठीक छ। सम्भावित द्वन्द्व र झगडाहरूबाट बच्नको लागि यो एकदम प्रभावकारी तरिका हो।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि प्रत्येक अभिभावकसँग केही खाली समय छ, बच्चाको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारीबाट केही मिनेटको लागि जडान विच्छेद गर्न सक्षम हुन।
यदि आवश्यक छ भने, मद्दतको लागि साथी वा परिवारलाई सोध्न ठीक छ। कहिलेकाहीँ यस्तो मद्दत तनाव वा चिन्ताको अवस्थाबाट बच्न आवश्यक हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » सम्बन्ध » पहिलो सन्तानको आगमनले उत्पन्न हुने संकटको सामना कसरी गर्ने